बिद्यालयमा ४ कोठा निमाण गर्ने सम्झौता गरेर ३ कोठा बनाएपछी बजेट रोक्का ! – ebaglung.com
बिद्यालयमा ४ कोठा निमाण गर्ने सम्झौता गरेर ३ कोठा बनाएपछी बजेट रोक्का !
२०७३ चैत्र २५, शुक्रबार २१:५७	थप समाचार
विजय राना, बागलुङ, २०७३ चैत २५ । बागलुङ नगरपालिका वडा ११ रायडाँडामा रहेको महाविद्याजन उच्च माध्यामिक विद्यालयमा २४ लाख रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा ४ कोठे भवन निर्माण गर्न बजेट बिनियोजन गरिए पनि ३ कोठे मात्र निर्माण भएको रहस्य खुलेको छ ।
सम्झौता अनुसार काम नहुँदा गाउँको विकास निर्माण कार्यको नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको भन्दै स्थानीयले सम्झौता अनुसार काम नगर्नेलाई आवश्यक कार्बाही हुने पर्ने माग गरेका छन् ।
उक्त ४ कोठे भवन निर्माणको लागि २०७० सालमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी नन्दलाल पौडेल र विद्यालयको तर्फबाट तत्कालीन प्रचार्य डिल्ली प्रसाद पौडेल र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष (हाल नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति) दिपेन्द्रबहादुर थापा बिच सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुरुप भवन निर्माण नगरिएपछि विद्यालयको खातामा रहेको बजेट रोक्का गरिएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीका अनुसार संझौता अनुसार ४ कोठे भवन निर्माण हुनु पर्नेमा अहिले आएर अर्को कोठा फेरी थप्छौँ भनेपनि त्यस्तो गर्न पाइदैन ।
भवनमा गुणस्तरहीन सामाग्रीको प्रयोग गरेको समेत स्थानीयको भनाई छ । भवनमा राखिएको झ्याल ढोकाहरु पूराना राखिएको स्थानीयको आरोप छ ।
यस बारेमा विद्यालयका पूर्व प्रचार्य (गत फागुन महिनामा मात्रै विद्यालय छाडेका) डिल्लीप्रसाद पौडेलले भौगोलिक कठिनाईका कारण ४ कोठे बनाउन नसकिएको बताए ।
बागलुङका जिल्ला शिक्षा अधिकारी विष्णुप्रसाद मिश्रले सम्झौता अनुसार काम नबन्दा सम्म बजेट रोका गर्ने बताएका छन् । मिश्रले बेइमानी ढंगले सम्झौता बिपरित कार्य गर्नेलाई अन्य कानुनी कार्वाही समेत हुने स्पष्ट पारेका छन् । यस्तै घटना तंग्रामको एक विद्यालयको भवन निर्माण गर्दा भएको छ । दुई कोठा बनाउने बजेट लगेर एक कोठा बनाएको रहस्य खुलेको थियो, ।
नेपाल पत्रकार महासंघको बैठक सम्पन्न : पत्रकार बराल र निशानीलाई पुरस्कृत गरिने !
गुल्मीमा १९ सय ६७ जनाको आवेदन परेकोमा ८ सय २० जना म्यादी प्रहरी छनौट !